के मेयर द्धारीकालाल चौधरी कानूनभन्दा माथि हुन् ? प्रश्न सोध्ने पत्रकारको नाकको हड्डी भाँच्नुपर्छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के मेयर द्धारीकालाल चौधरी कानूनभन्दा माथि हुन् ? प्रश्न सोध्ने पत्रकारको नाकको हड्डी भाँच्नुपर्छ ?
जेठ २२ गते, २०७६ - १४:४९
काठमाडौं । इटहरीका मेयर द्धारीकालाल चौधरी बेला–बेला चर्चामा आईरहन्छ । उनले गरेका कतिपय व्यवहार अनि प्रस्तुती सर्वत्र निन्दाको विषय बनिरहेको छ । पछिल्लो समय उनले पत्रकारलाई ‘नाकको हड्डी भाँच्छु’ भनेको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाका नेतासमेत रहेका चौधरी बारे पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा व्यापक टिप्पणी भएको छ । उनले कर्मचारीलाई कार्यकक्षमै कुटेको विषयदेखि प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई कुटपिटको तहमा उत्रदैं धम्की दिएको विषयले चर्चा पाएको हो । चौधरीले गरेका पछिल्ला गतिविधिले कानूनको सर्वौच्चता र अन्य अंगहरुको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । उनले कानूनभन्दा माथि हुँ भन्ने जसरी विरोधीलाई सिध्याउने तहमा लाग्नुले प्रश्न उब्जेका छन् ।
कर्मचारीलाई कुटेका थिए
गत जेठ ८ मा मेयर चौधरीले इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ का वडाका सचिव मनोज दाहाल र सबइञ्जिनियर रामबहादुर थापालाई कुटेका थिए । उनले कर्मचारीलाई घुस्याहा भन्दै कुटेका थिए । पीडित कर्मचारीहरुले सिसी क्यामेरा बन्द गरेर आफुहरुलाई कुटिएको बताएका थिए । जसको विरुद्धमा कर्मचारीहरु आन्दोलित हुँदा केहि दिन नगर र नगरको वडाहरुका कामकाज ठप्प भएको थियो ।
कर्मचारी कुटपीटको काण्डबारे प्रश्न सोध्दा पत्रकारलाई नै कुट्न पुगे
कर्मचारी कुटपीटको बारे पत्रकारले प्रश्न सोध्दा मेयर चौधरीले दुव्र्यहार गरेका थिए । उनले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमकै बीच पत्रकारलाई दुव्र्यहार गरेका थिए । पत्रकारले कानूनी प्रक्रियाबाट घुस्याहा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै तपाईंले किन यस्तो व्यवहार गरेको भनि प्रश्न सोध्दा उनले तिम्रो हैसियत के हो भन्दै दुव्र्यवहार गरेका थिए ।
प्रश्न सोध्दा गरिएको दुव्र्यहारबारे मिडियामा चर्चा भएपछि उनले पत्रकारहरुलाई धम्क्याउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकारलाई निषेध जस्तै व्यवहार गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनलाई प्रश्न सोध्ने पत्रकार विराट अनुपमलाई नाकको हड्डी भाँच्छु भन्दै फोनमा धम्क्याएका थिए ।
मेयर द्धारीकालाल चौधरीले पत्रकारलाई फोन मार्फत धम्क्याउँदै अब नाकको हड्डी भाँच्छु भनेका छन् । उनले फोनमा यसो भनेका छन्, ‘तिमीले केके लेख्न बाँकी राख्या छौ ? तिम्रो नाकको हड्डी भाँच्नलाई एक करोड छुट्याएको छु । एउटा घडेरी छुट्याएको छु । तेरो नाकको हड्डी भाँच्न मात्रै बाँकी छ, अब म गुण्डागर्दीमै उत्रिएँ । तेरो नाकको हड्डी भाँचेर मात्रै मलाई सन्तोष हुन्छ भाई ।’
सिएफल काण्डमा मुछिएका थिए चौधरी
तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट इटहरी उप–महानगरपालिकाको मेयर बनेका द्धारिकालाल चौधरी मेयर बनेको केहि समय मै विवादमा आएका थिए । उनी सिएफल खरिद काण्डमा मुछिएका थिए । चौधरीले सिएफल खरिद गर्दा घुस खाएको भन्दै मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो । सामान्य बजार मुल्यभन्दा दोब्बर बढिको बिल तयार पारिएको भन्दै विरोध भएको थियो । अख्तियारले छानविनमा ल्याए पनि कारबाही भएको छैन् । २० लाखभन्दा बढि अनियमतता भएको विषय बाहिर आएको छ ।
मेयरले आत्माआलोचना गर्नुपर्छ – नेकपा नेता
मेयर चौधरीको व्यवहारबारे नेकपाकै नेताहरु असन्तुष्ट छन् । नेकपाका नेताहरुले चौधरीलाई आत्माआलोचना गर्न सुझाएका छन् ।
प्रदेश नम्बर–५ का मुख्यमन्त्री तथा नेकपा नेता शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत चौधरीलाई आत्माआलोचना गरेर अगाडि बढ्न सुझाएका छन् उनले लखेका छन्, ‘द्वारिकाजीको आक्रोश पीतपत्रकारिता र भ्रष्टाचार विरुद्ध भए पनि अभिव्यक्ति भने अस्वाभाविक र गलत छन्’ मुख्मन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्, ‘तसर्थ उहाँले जनप्रतिनिधि र पार्टी कार्यकर्ता दुबै हिसाबले आफ्ना अभिव्यक्तिलाई सच्याउँदै आत्मआलोचना गर्नु उचित हुनेछ ।’
जेठ २२ गते, २०७६ - १४:४९ मा प्रकाशित